Zingaphi ii-beats ngomzuzu ziqhelekileyo kwikati? | Amakati eNoti
Zingaphi ii-beats ngomzuzu ziqhelekileyo kwikati?
Umfanisi weLaura Torres | | Curiosities
Ikati yinto enoboya ethi, xa ubeka isandla esifubeni sayo ukuze uve ukubetha kwentliziyo yayo, into yokuqala oyiphawulayo kukuba ibetha ngesantya esikhawulezayo kunesabantu. Kakhulu kangangokuba akumangalisi ukuba uzibuze ukuba ingaba yinto eqhelekileyo na leyo, okanye ukuba kukho into eyenzeka kuye oyityeshelayo.
Esi senzo sihle ukwenza amaxesha ngamaxesha, kuba kunokuba luncedo ukufumanisa ukuba umhlobo wethu onemilenze emine unesifo. Kodwa kunjalo, ngenxa yoko kukwabalulekile ukufumanisa ukuba zingaphi ii-beats ngomzuzu eziqhelekileyo kwikati. Ke yile nto siza kuthetha ngayo ngokulandelayo.
1 Leliphi inqanaba lentliziyo eliqhelekileyo kwikati?
1.1 Ukubetha ngomzuzu kwikati ayisiyiyo kuphela into ekufuneka uyiqwalasele
1.2 Ndingazilinganisa njani ezi paramitha kwikati yam?
2 Uphi umthambo we-saphenous kwaye ndiyilinganisela njani ukubetha kwentliziyo yam?
3 Kutheni ikati yam inokubetha kwentliziyo ngendlela engaqhelekanga?
4 Uya nini kugqirha wezilwanyana?
Leliphi inqanaba lentliziyo eliqhelekileyo kwikati?
Intliziyo yekati yakho iya kuxhomekeka kakhulu kubudala bayo kunye nobungakanani. Inqanaba lekati eliqhelekileyo eliphakathi kwe-140 kunye ne-220 ukubetha okanye ukubetha ngomzuzu. Kwimeko yeekati, izinga lokubetha kwentliziyo liphezulu kunezinja. Kwizinja ezi ziphakathi kwe-60 kunye ne-180 beats ngomzuzu.
Ngokwesiqhelo xa amantshontsho ebusana amancinci imetabolism yawo ikhawuleza, ke ngoko, izinga lentliziyo liphezulu. Oko kukuthi, intliziyo yakho ibetha ngaphezulu ngomzuzu. Kwaye njengoko ukhula imetabolism yakho iyacotha, kwaye ithiyori, izinga lokubetha kwentliziyo yakho nalo liyancipha.
Ukubetha ngomzuzu kwikati ayisiyiyo kuphela into ekufuneka uyiqwalasele
Okokuqala, xelela ukuba yenaizinga lokubetha kwentliziyo sisiseko somzimba xa kuvavanywa ukuba ikati yakho iphilile kangakanani. Nangona kunjalo, ayisiyiyo kuphela ipharamitha yomzimba ekufuneka ithathelwe ingqalelo.
Kunye nenqanaba lentliziyo ikati yakho elinalo, kuya kufuneka uthathele ingqalelo:
Ukuphefumla rhoqo (FR): 20-42 ukuphefumla / min)
Ixesha lokuzalisa iCapillary (TRC): <2 imizuzwana
Ubushushu bomzimba (Tª): 38-39,2 ºC
Uxinzelelo lwegazi (IPAS): 120-180 mm Hg
Kuthetha uxinzelelo lwe-arterial (IPAM): 100-150 mm Hg
Uxinzelelo lwegazi Diastolic (IPAD): 60-100 mm Hg
Ukuveliswa komchamo (Iziphumo zomchamo): 1-2 ml / kg / h
Ndingazilinganisa njani ezi paramitha kwikati yam?
Ukusuka kwezi paramitha zingasentla ungalinganisa ixesha le-capillary refill, inqanaba lokuphefumla kunye neqondo lobushushu ekhaya ukuba kukho imfuneko.
El ixesha lokugcwalisa capillary ibonwa kwiintsini zekati yethu. Xa ucinezela umnwe kwiintsini, indawo ephantsi koxinzelelo iya kujika ibe mhlophe. Into ekufuneka siyigcinile ithatha ixesha elingakanani ukuze iphinde ibe bomvu kwakhona.
La izinga lokuphefumla Ungayibona ngokujonga esifubeni sakho sekati. Yibeke nkqo kuzo zone, okanye ulele ngecala. Nje ukuba ubekweso sikhundla, jonga amaxesha aphelelwa ngawo, ngamanye amaxesha, isifuba sidumba. Njengoko ndisazi ukuba kunzima ukugcina ikati imile okomzuzu kuloo ndawo, ndiza kukucacisela ngenye indlela. Thatha isitophuwashi, leyo ibandakanyiwe kwi-smartphone yakho iya kukunceda, kwaye ubale amaxesha apho isifuba sakho sidumba khona imizuzwana eli-15. Phindaphinda inani lokuphefumla olithathayo ngelo xesha ngesine kwaye sele uphefumla ikati yakho ngomzuzu.
La lobushushu Unokuyilinganisela ukuba kukho imfuneko ngesilinganisi sobushushu esinencam eguqukayo. Kuyacetyiswa ukuba usebenzise ijeli ye-petroleum encinci okokoko kufakwa incam ye-thermometer kwindawo yakhe yokuthatha ubushushu bomzimba wakhe. Yinto abangayithandiyo kwaye ebenza ukuba babe noxinzelelo, ngenxa yoko andikukhuthazi ukuba uthabathe ubushushu bakhe ngaphandle kokuba ugqirha wezilwanyana ubona kufanelekile.
Kwimeko izinga lokubetha kwentliziyo into ethi qatha engqondweni kukubeka isandla sethu kwisifuba sakhe, kwicala lasekhohlo phakathi kombambo wesithathu nowesine, ukhangela intliziyo. Kodwa ngokwenene Kulula ukulinganisa ukubetha kwentliziyo kwi-vein saphenous.
Uphi umthambo we-saphenous kwaye ndiyilinganisela njani ukubetha kwentliziyo yam?
Esona sikhundla sikhululekileyo sokulinganisa izinga lokubetha kwentliziyo kumthambo we-saphenous kungokubeka ikati yethu kwimilenze yayo emine, nangona singayenza nekati ilele ngokuthe tye kwelinye lamacala ayo.
Xa sele unayo ikati yakho kwezi zikhundla yiya komnye wemilenze yangasemva, ethangeni lakhe. Beka isandla sakho ngesithupha sakho ethangeni langaphandle neminye iminwe emine ethangeni elingaphakathi. Uya kuziva ngokugqibeleleyo ukubetha kwentliziyo. Njengakwizinga lokuphefumla Ithatha ixesha lemizuzwana eli-15 kunye nenani lokubetha elikunika lona ukuphinda-phinda kane.
Kutheni ikati yam inokubetha kwentliziyo ngendlela engaqhelekanga?
Ukubetha kwentliziyo yekati kunokuchaphazeleka kwizinto ezininzi. Nangona kunjalo, oku akusoloko kuthetha ukuba umntwana wethu uneengxaki zentliziyo. Nalu uluhlu lwezona meko ziqhelekileyo apho ikati yethu inokuba nenqanaba lentliziyo elingaqhelekanga:
Ukuba ukwimeko ye- uxinzelelo
Ukuba unesifo seswekile
Ukuba unayo nayiphi na ingxaki yentliziyo okanye ukujikeleza kwegazi.
Ukuba uphelelwe ngamanzi emzimbeni.
Ukuba unayo intlungu.
Ukuba uyahlupheka ityhefu okanye ityhefu.
Uya nini kugqirha wezilwanyana?
Ngamanye amaxesha akukho lula kwaphela ukwazi ukuba ikati inesimo sentliziyo okanye akunjalo, kuba i-feline yingcali xa kufikwa ekufihleni iintlungu. Ngoku, njengoko benditshilo kwicandelo elidlulileyo, ukubetha kwentliziyo ayisiyiyo kuphela into ekufuneka siyithathele ingqalelo.
Yiya kwiziko lezilwanyana elithembakeleyo ukuba uphawula ukuba ikati yakho iyabulala, ayinalo uludwe, ayonwabanga, ayityi okanye itye kancinci kunakuqala, okanye itya ngokungxama.. Nokuba usela amanzi kakhulu okanye awuseli kwaphela. Isizathu kukuba xa iikati zingaphilanga esinye sezizathu zokuqala ukuba baninzi kukuba banesimo sengqondo, bayarhola ngakumbi. Inokude ikukrwele xa uzama ukuyichukumisa okanye ukuyibamba, ngelixa ibingazange ngaphambili. Esinye isizathu sokubonisana inokuba xa bengafuduki kwibhokisi yabo yesanti kwaye benze njalo kwezinye iindawo zendlu, abantu abaninzi bacinga ukuba isilwanyana siyayicaphukisa, kodwa ingekuko ukuba oko, yinto ebonisa ukuba into ayisiyiyo ngqo kwikati yakho.
Kananjalo ukuba uyaqaphela ukuba ikati yakho uphulukana nokulungelelaniswa kwemilenze xa uhamba, oko kuginya amathe kakhulu, okugabha amagwebu okanye urhudo, yiya ngokukhawuleza kugqirha wezilwanyana. Isenokuba yimeko yotywala okanye ityhefu kwaye akukho xesha lokuchitha. Kwaye ayitsho ngaphandle kokuba ukuba yikati engaphantsi konyaka, yonke into iba ngxamiseko ngakumbi kuba basemngciphekweni wento eyenzekayo kubo.
Ndiyathemba ukuba le posi iluncedo kuwe. Kwaye khumbula ukuba ungavumeli ixesha lidlule. Ubomi bakho bunokuba sengozini.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iikati zikaNoti » Amakati » Curiosities » Zingaphi ii-beats ngomzuzu ziqhelekileyo kwikati?
Kuya kufuneka umse kugqirha wezilwanyana ngokukhawuleza. Nguye kuphela onokukuxelela ngokuchanekileyo ukuba unesifo esingakanani, nokuba ungasinyanga njani.
Kutheni sithanda iikati
Ikati yaseBangali, uboya obunenkangeleko yasendle kunye nentliziyo enkulu